Muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah waxay ku kici karaan $ 3000 waxayna qaadi karaan laba shaashadood oo 8K ah | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan sii wadeynaa inaan kahadalno muraayadaha xaqiiqada dhabta ah ee macquul ahaanta ee Apple. Xanta ayaa tilmaamaysa markan inay run noqon karaan goor dhow laakiin inay heli doonaan dad aad u tiro yar. Qiimaha la saaray qalabkan ayaa qiyaastii ah 3000 euro, qiimo aad u qiimo badan, dabcan, aad ugu badan qaabka Apple dhawaan.
Xanta cusub ama warbixinnada ayaa tilmaamaya in suuq-geynta suuqa ee muraayadaha cusub ee dhabta ah ee Apple ay aad ugu dhowaan karto qiimo aad u fog. Waxay noqon lahaayeen kudhowaad 3000 euro. Taasi waa sababta warbixinta lafteedu u muujisay in shirkaddu ku qiyaaseyso inay iibin doonaan kaliya hal unug maalintii Apple Store. Dukumiintigaan ayaa soo muuqday ku jira Macluumaadka. Waxaa sidoo kale la sheegay in muraayadaha dhabta ah ee isku dhafan ay yeelan doonaan laba bandhig oo leh 8K xal mid kasta.
Qiimaha lagu xamanayo ayaa laga yaabaa inaanay gebi ahaanba fogayn haddii saadaalinta oo dhami run noqoto dhamaadka. Waxay umuuqataa inay yeelan doonto in ka badan toban kamaradood si loola socdo dhaqdhaqaaqa gacmaha isqabsada iyo muujinta fiidiyowyada dhabta ah ee dadka isticmaala. Oo ay la socdaan kuwa heer sare ah 8K muujinta sare iyo tiknoolajiyad casri ah oo aad awoodi doontid inaad kula socoto raadinta indhaha. Ku darista laba shaashadood oo 8K ah oo qalabka ah ayaa ka dhigeysa mid tayo ahaan muuqaalkeedu aad uga sarreeyo kan moodooyinka kale.
Ilaha lagu xusay wargeysku waa, sida ay tilmaamayaan, lama garanayo, laakiin waxay u muuqataa waxay ka hadlayso iyo macluumaadka ay siiso inay run noqon karaan. Waxay u badan tahay in qalabkani u yahay astaamaha lagu sheegay iyo qiimaha lagu xanto, Waxaa loogu talagalay shirkadaha halkii shakhsiyaad. Fikradani waxay u horseedi kartaa suurtagalnimada xitaa ka hadalka jiritaanka laba nooc oo muraayadaha dhabta ah ee muuqaalka ah.
Mid shaqsiyaadka, noqoshada qaab fudud oo leh astaamo yar iyo dabcan mid aad u jaban iyo tusaalaha aan halkaan uga soo hadalnay, oo loogu talagalay shaqaale takhasus badan leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah waxay ku kici karaan $ 3000 waxayna qaadi karaan laba shaashadood oo 8K ah